Myanmar has agreed to the proposed appointment of H.E. Mr. Hector Conde Almeida as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Cuba to the Republic of the Union of Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of H.E. Mr. Hector Conde Almeida as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Cuba to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. Hector Conde Almeida was born in 1963. He holdsaMaster’s degree in European Law, Carlos III University in Madrid of Spain. He served asaSpecialist on International Agencies, Executive Secretariat for Nuclear Affairs, dealing with nuclear scientific affairs of the Ministry of Science, Technology and Environment from 1987 to 1995. He also served as the head of the International Cooperation Division under the Department of International Cooperation of the Ministry from 1995 to 2006. Afterwards, he served as the first secretary of the office for Economic, Commercial and Scientific/Technical Affairs at the Cuban Embassy in the People’s Republic of China from 2006 to 2011. He also served as the Deputy Director General at the Department of International Relations of the Ministry of Science, Technology and Environment from 2011 to 2016. He can speak Spanish, English and Russian.
H.E. Mr. Hector Conde Almeida will be concurrently accredited as Ambassador of the Republic of Cuba to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok.
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဟက်တာ ကော်န်ဒီ အယ်လ်မေးဒါး အား ခန့်အပ်ရန်သဘောတူ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဟက်တာ ကော်န်ဒီ အယ်လ်မေးဒါး အား ခန့်အပ်ရန် ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမှ အဆိုပြုလာခြင်းကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
Mr. Hector Conde Almeida ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့ရှိ Carlos III တက္ကသိုလ်မှ ဥရောပသမဂ္ဂဥပဒေဖြင့် မဟာဘွဲ့ကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ နျူကလီးယားသိပ္ပံရေးရာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတွင် အထူးကျွမ်းကျင်အရာရှိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲတွင် ဌာန အကြီးအကဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျူးဘားသံရုံးတွင် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် သိပ္ပံ/နည်းပညာဆိုင်ရာ ပထမအတွင်းဝန် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်အသီးသီးထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ ဟက်တာ ကော်န်ဒီ အယ်လ်မေးဒါးသည် စပိန်ဘာသာစကားအပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား နှင့် ရုရှားဘာသာစကား တို့ကို တတ်ကျွမ်းသည်။
မစ္စတာ ဟက်တာ ကော်န်ဒီ အယ်လ်မေးဒါး သည် ဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကျူးဘားသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်။